Makedonia: Bilaogin-tsakafo sy loharanom-baovao hafa momba ny Nahandro ao amin’ny tranonkala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2018 4:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, македонски, srpski, English
Raha jerena ny zava-misy ao anatin'ny vondrona momba ny nahandro [MKD] ao amin'ny tranonkala Makedoniana mpanagona votoaty antserasera Ping.mk, ny bilaogy momba ny sakafo mavitrika indrindra dia ny Sitno seckano (Voatetika manify).
Tsy mitsahatra mamoaka nahandro amin'ny teny Makedoniana sy amin'ny teny Anglisy ny Sitno seckano, sakafo nandraman'ireo mpanoratra telo tamin'ny alalan'ny fahandroana, fakàna sary sy fihinanana, manome fomba fijery samihafa amin'izany. Ohatra – ny Mofomamy amin'ny karaotin'ny lohataona:
Sary avy amin'i Maja Dimitrova (nahazoana alalana)
Nanomboka tamin'ny fiandohany tamin'ny volana marsa 2009, nitombo hatrany ny herin'ity bilaogy ity, noho ny kalitaon'ny votoaty orizinaly, miampy ny ezaka ara-barotra tahaka ny fahazoana loka, izay voalohany indrindra tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Makedoniana. Navoaka (tamin'ny alalan'ny zon'ny mpamorona) tao amin'ny bilaogy hafa, tahaka ny Balkan Cuisine ny nahandrony.
Kintana niakatra tamin'ity sehatra ity ny bilaogy Vegetarijanstvo (Tsy misy hena), izay mampiasa ny sehatra bilaogy eo an-toerana Kauza.mk, ampiasaina ho fampitam-baovao momba ny resaka fikatrohana fanovana ara-tsosialy.
Bilaogy ara-tsakafo hafa ny Prikazni od edna mala kujna (Tantara avy amin'ny lakozia kely), izay mampiseho endrika mampiavaka ny fanehoana sakafo: sarin'ny pejin'ny kahie nosoratana an-tanana, miaraka amin'ny fanampim-panazavana ao amin'ny lahatsoratra. Ohatra: Saladin'ny tantsambo [MKD]:
Saladin'ny tantsambo: Ampangotraho ny ovy sy ny atody miaraka amin'ny karaoty, kokombra, tongolo be mandritra ny 12-15 minitra. Teteho boribory ny ovy sy ny tongolo be. Apetraho sosona miaraka amin'ny kokombra, karaoty sy atody. Asio vinaigitra, menaka, sakay sy sira isaky ny sosona. Ampio fangaro mayonezy, lakremy mangatsiaka ary motarda.
Indraindray, manoratra momba ny traikefany ara-tsakafo ireo bilaogera “manoratra toe-javatra ankapobeny”. Ohatra, nanoritsoritra ny “biriky hena” [MKD], natao tamin'ny toton-kena-kisoa 30 kg, tongolo gasy 5 kg sy divay 2 litatra i Bochvarov …
Mifanohitra amin'ireo bilaogy momba ny nahandro manana fiavahana manokana, nisafidy hampiseho endrika orinasa ireo tranonkala ara-barotra mikasika ny sakafo, tahaka ny Hrana (Sakafo) sy Gurman (Tendan-kanina).
Indraindray mamoaka lahatsoratra mifandraika amin'izany ireo tranonkala miompana manokana amin'ny sehatra hafa. Misy sehatra ahitana ny fijerena ireo tranonkala ara-tsakafo ny veb-sajt na denot (Tranonkala androany), ary matetika miresaka momba ny sakafo sy ny fangaron-tsakafo ao amin'ny sehatra sakafo ara-pahasalamana ny tranokala Makedoniana miady amin'ny homamiadana. Mampiseho lahatsoratra momba ny fampivadiana ny divay sy ny sakafo ihany koa indraindray ny Tikvesh Winery, izay voalaza fa orinasa voalohany makedonianina nanokatra bilaogy.
Na dia izany aza, mbola vitsy ny isan'ny loharanom-baovao antserasera momba ny nahandro amin'ny teny Makedoniana, ary vao manomboka ny fidiran'ny tontolon'ny bilaogy eo an-toerana mikasika izany. Ary angamba izany no mahatonga ny Hrana i vino (Sakafo sy Divay), marika sakafo lehibe indrindra eo an-toerana izay manao fandaharana amin'ny fahitalavitra sy gazetiboky- namoaka gazety ahitana “nahandro amin'ny aterineto”, bilaogy Serba avokoa ny loharanom-baovaony rehetra, tahaka ny Palachinka (Krepy Pancake) sy ny Moje grne (Ny vilaniko).